Iindaba -Iimpawu zangaphandle zefanitshala zikhawulezisa isantya sokuyilwa kwefektri
Iimpawu zefanitshala zangaphandle zikhawulezisa isantya sombeko wefektri
Ngokubuyiselwa koqoqosho olukhulu kunye nokwanda kwenqanaba lokungena kwe-e-yorhwebo, intengiso yefenitshala yangaphandle yaseTshayina iya isanda ngokuthandwa. Ingxelo esanda kukhutshwa yokubeka iliso kwiziko lase China lokuPhononongwa kwedatha ibonisa ukuba kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, umthamo wentengiselwano yemali yokuthumela ngaphandle e China ingaphezulu kakhulu kunyaka ophelileyo.
Imbonakalo entle yemali yentengiso yangaphandle yefanitshala yase China itsale umdla weengxilimbela eziphambili zehlabathi. Ezi zigebenga zamazwe aphesheya ziye zakhawulezisa isantya sokuyilwa e-China, kwaye iitafile ezisongelwe ngaphandle azikho ngaphandle.
Ngakumbi nangakumbi abantu bathanda itafile yokusonga elula, isebenzisa izinto ezilunge kakhulu .Phantse zonke iifamili zinetafile enye yokusonga enje ngemveliso yethu yomzi itafile kunye nosihlalo.
Kulo nyaka, sithenga oomatshini abathathu bokubumba kwaye saqesha aba-2 abaphezulu ukuba bajoyine iqela lethu lophuhliso. Ke ngoku inyuse amandla emveliso ngama-50% xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo
Yithembe itafile yethu esongelayo yeplastiki kunye nesihlalo esiya kuthi sikhawuleze ukungena kwimarike